काठमाडौँ -ब्रेन ट्युमर भन्‍ने शब्द नेपाली जमानामा नौलो हुन छाडेको छ। फलानो मान्छेलाई ब्रेन ट्युमर भयो रे भन्‍ने कुराकानी प्रशस्त सुन्‍न पाइन्छ। के हो त ब्रेन ट्युमर ? ब्रेनको अर्थ मानव मस्तिष्क हो भने ट्युमरको अर्थ अंगमा मासु पलाउनु हो। ट्युमर विभिन्‍न किसिमका हुन्छन्। सुन्दाखेरि ट्युमर भन्‍ने बित्तिकै डरलाग्दो भए पनि सबै ट्युमर नराम्रो हुँदैनन्।
ब्रेन ट्युमर के कारणले हुन्छ यकिन साथ भन्‍न सकिँदैन। वातावरणीय तत्त्वलाई बे्रन ट्युमरको एक प्रमुख कारक तत्त्वका रूपमा लिइन्छ। वातावरणमा हुने विभिन्न किसिमका तत्त्वहरूमध्ये विकिरण अर्थात् रेडिएसनलाई पनि बे्रन ट्युमरको कारक पाइन्छ। कुनैकुनै ब्रेन ट्युमर वंशानुगत कारणले पनि हुन सक्दछ।
– टाउको दुख्‍नु : टाउको दुख्यो भन्दैमा सबैलाई ब्रेन ट्युमर नै हुन्छ भन्ने होइन। तर टाउको दुखिरहने, अथवा पहिलाभन्दा टाउको दुखाइको प्रकृति परिवर्तन भएमा आवश्यक जाँच गरेर ब्रेन ट्युमर छैन भन्ने कुरा निश्चित गर्नु राम्रो हुन्छ।
– छारेरोग: छारेरोग भन्नाले शरीरको एक मात्र भाग वा पूरै शरीर कम्पन भई बेहोस अथवा अर्धचेत अवस्थामा पुग्ने रोग बुझिन्छ। छारेरोग आफैंमा एउटा रोग हुन सक्दछ। अर्कोतर्फ छारेरोग लक्षण पनि हुन सक्दछ। छारेरोग ब्रेन ट्युमरको एक प्रमुख लक्षण हो। तसर्थ छारेरोग हुनेबित्तिकै आवश्यक जाँच गरी यो आफैंमा एउटा रोग हो कि अथवा मस्तिष्कको अन्य खराबीले भएको हो भनी पत्ता लगाउनु जरुरी हुन्छ।
नेपालमा ब्रेन ट्युमरको उपचार सम्भव छ। नेपालका विभिन्‍न अस्पतालमा ब्रेन ट्युमर उपचारको लागि आवश्यक दक्ष तथा अनुभवी न्युरोसर्जन तथा उपकरण उपलब्ध छन्। लामो समयदेखि विभिन्न किसिमका ब्रेन ट्युमरका शल्यक्रिया पनि भइराखेका छन्। नेपाली दक्ष जनशक्ति माथि विश्‍वास गरौं र हौसला दिऊँ।
साबधान ! यी तीन राशि हुनेहरुले सुन लगाउनै हुँदैन !